Izindaba - Ukusetshenziswa Kwe-Latex Powder Ebuye kabusha
Ukusetshenziswa Kwe-Redispersible Latex Powder
I-redispersible latex powder isetshenziswa kakhulu emikhakheni yokwakha efana nokufakwa kwangaphandle kodonga, ukubopha ithayili, ukwelashwa nge-interface, i-gypsum yokubopha, i-stucco gypsum, isakhiwo sangaphakathi nodonga lwangaphandle lodonga, udaka lokuhlobisa, njll, olunebanga lesicelo elibanzi kakhulu nemakethe enhle amathemba.
Okwamanje okusetshenziswa kabanzi okwenziwa kabusha kwe-polymer powders emhlabeni yilawa: IVinyl Acetate Polyvinyl Acetate (VAC / E), Terpolymer ye-Ethylene, Vinyl Chloride neVinyl Laurate (E / VC / VL), iVinyl Acetate Ester ne-ethylene kanye ne-fatty acid vinyl ester ternary ephezulu i-Copolymer irobhothi (VAC / E / VeoVa), lezi zinhlobo ezintathu ze-polymer powder eziphinde zisebenze emakethe, ikakhulukazi i-vinyl acetate ne-ethylene Copolymer irabha le-powder i-VAC / E, inesikhundla esiphambili emkhakheni womhlaba, futhi imele izici zobuchwepheshe zokuphinda ziphenduke. impuphu. Ukusuka kokuhlangenwe nakho kobuchwepheshe kokusebenzisa ama-polymer aguqulwe ngodaka, kusese yisixazululo esihle kakhulu sobuchwepheshe:
1. Ungomunye wama-polymer asetshenziswa kakhulu emhlabeni;
2. Isipiliyoni sokusebenzisa kakhulu endimeni yezokwakha;
3. Ungahlangabezana nezakhiwo zokuhlaziya ezidingekayo ngodaka (okungukuthi, ukusebenza okudingakalayo);
4. I-Polymeric resin namanye ama-monomers inezimpawu zento ephansi ye-organic tete (VOC) negesi ephazamisayo ephansi;
5. Inezimpawu zokumelana okuhle kwe-UV, ukumelana nokushisa okuhle nokuqina kwesikhathi eside;
I-6, ngokumelana okukhulu ne-saponification;
7, inebanga lokushisa lokushintsha ingilazi elibanzi kakhulu (Tg);
8. Inezinto ezinhle kakhulu zokubopha, ukuguquguquka nezakhiwo zemishini;
9. Unolwazi olude kakhulu ekukhiqizeni amakhemikhali nokuthi ungakugcina kanjani ukuzinza kwesitoreji ekukhiqizeni imikhiqizo esezingeni elifanele;
10.Kulula ukuhlanganisa ne-colloid (i-polyvinyl alcohol) yokusebenza
Umdwebo 1 isithombe sikagesi ophinda ubonakale uthengiswa emakethe
Izici zempuphu etholakala kabusha
1. I-redispersible powder iyimpuphu engancibilika ngamanzi. I-copolymer ye-ethylene ne-vinyl acetate, ene-polyvinyl alcohol njenge-colloid evikelayo.
2. I-VAE redispersible latex powder inempahla eyakha ifilimu, i-50% solution equeous yakha i-emulsion, futhi yakha ifilimu efana nepulasitiki ngemuva kokubekwa engilazini amahora angama-24.
3. Ifilimu elakhiwe linokuguquguquka okuthile nokumelana namanzi. Ingafinyelela emazingeni kazwelonke.
I-4.Redispersible latex powder inokusebenza okuphezulu: inekhono eliphezulu lokuqina nokusebenza okuyingqayizivele, ukumelana kwamanzi okungafani, amandla amahle okubopha, futhi inika ukumelana nokubumba okungcono kakhulu kwe-alkali, okungathuthukisa ukunamathela kongqimba namandla okuguquguqukayo Ngaphezu kwepulasitiki, ukugqoka ukumelana kanye nokusebenza, inokuguquguquka okuqinile kudaka olungamelana nemithi.
Ukusetshenziswa kwempuphu ye-latex etholakala kabusha kudaka oluyimpuphu owomile:
Mort Isigaxa samatshe nosimende: I-latex redpersible powder ine-impermeability enhle, ukugcinwa kwamanzi nokubamba iqhwa, namandla amakhulu okubopha, angaxazulula ngempumelelo ukuqhekeka nokungena okukhona odakeni lwamasiko wendabuko. Nezinye izindaba ezisezingeni.
Material Usimende wokuzinzela kanye nempahla yaphansi: I-latex redpersible powder inamandla amakhulu, ukuhlangana okuhle, ukunamathela nokuguquguquka okudingekayo. Ingathuthukisa ukunamathela, ukumelana ne-abrasion kanye nokugcinwa kwamanzi kwezinto. Kungaletha i-rheology enhle kakhulu, ukusebenziseka nokusebenza okuhle kakhulu kokuzishelelisa phansi kukadaka lokuzilolonga phansi kanye ne-screed.
◆ Isinamathisela i-Tile, i-tile ejobayo yokuhlangana: I-redispersible latex powder inokunamathela okuhle, ukugcinwa kwamanzi okuhle, isikhathi eside esivulekile, ukuguquguquka, ukumelana ne-sag kanye nokumelana okuhle kwe-thaw. Kungaletha ukunamathela okuphezulu, ukumelana okuthe xaxa nokusebenza okuhle kokwakha ukuze ukunamathela kwethayili, ukunamathela kwe-tile kungqimba futhi kunciphise ukuhlangana.
Ar Udaka olungangeni manzi: I-redispersible latex powder ithuthukisa amandla e-bond kuwo wonke ama-substrates, inciphisa imodulus eyi-elastic, ikhulise ukugcinwa kwamanzi, inciphise ukungena kwamanzi, futhi inikeze imikhiqizo ngokuguquguquka okukhulu, ukumelana nesimo sezulu esiphakeme kanye nezidingo zokuphakama kwamanzi. Inomphumela ohlala isikhathi eside wohlelo lokufaka uphawu ngezidingo zokuphepha kwamanzi kanye nokumelana namanzi.
Mort Udaka lokufakelwa odongeni lwangaphandle: I-redispersible emulsion powder ohlelweni lwangaphandle lokufakelwa kwangaphandle luthuthukisa ukubumbana kongqimba namandla okubopha ebhodini lokufaka, ukuze ukwazi ukufuna ukufakwa ngenkathi unciphisa ukusetshenziswa kwamandla. Ukufinyelela ukusebenza okudingakalayo, amandla eguquguqukayo kanye nokuguquguquka emikhiqizweni kadaka yangaphandle yokufakelwa udaka, ungenza ukuthi imikhiqizo yakho yofaka ibe nokusebenza okuhle kokubhokisana nochungechunge lwezinto zokufakelwa nesisekelo. Ngasikhathi sinye, kuyasiza futhi ukuthuthukisa ukumelana nomthelela nokuqhekeka kokumelana nobuso.
◆ Ukulungisa Usimende: I-latex redpersible powder inezimo eziguquguqukayo ezidingekayo, ukuncipha, ukuhlangana okuphezulu, amandla afanele okuguquguquka nokuqina. Yenza ukhonkolo wokulungisa uhlangabezane nalezi zidingo ezingenhla zokulungiswa kukakhonkolo wesakhiwo futhi ongeyona eyokwakheka.
◆ I-Interface Mortar: I-redispersible latex powder isetshenziselwa ukwelapha ingaphezulu kukakhonkolo, ukhonkolo ongaqinisekisiwe, isitini sikadaka we-lime kanye nezitini zomlotha ezindizayo, njll., Ukuxazulula inkinga yokuthi isibonisi akulula ukunamathela ngenxa yokufakwa amanzi ngokweqile noma ubushelelezi , futhi ungqimba lwe-plaster alunalutho. Isigubhu, ukuqhekeka, ukukhonkotha, njll. Kwenza amandla okuncipha aqine, kungabi lula ukuwa nokumelana namanzi, nokumelana nokuqandeka okungcono kakhulu. Inomphumela obalulekile ekusebenzeni okulula, ukwakhiwa okulula.
I-redispersible powder isetshenziswa ikakhulukazi ku-:
Udonga lwangaphakathi nolwangaphandle lwe-putty powder, i-adhesive adhesive, i-ejenti yokuhlanganisa i-powder, i-ejenti eyisixhumi se-powder eyomile, udaka lokuvikela udonga lwangaphandle, udaka lokuzilolonga, udaka lokulungisa, udaka lokuhlobisa, udaka olungangenwa ngamanzi kusigaxa sangaphandle sokushisa esomile esixubekile. Zonke izigqoko zisetshenziselwa ukuthuthukisa ubungqabavu nokuqina okunwebeka okuphezulu kosimende bendabuko, futhi ukubanikeza ukuguquguquka okungcono namandla okuqina okuqina ukumelana nokubambezela ukwenziwa kwemifantu odakeni lukasimende. Ngoba i-polymer nodaka bakha isakhiwo senethiwekhi esingenelayo, kwakhiwa ifilimu ye-polymer eqhubekayo kuma-pores, aqinisa ukubopha phakathi kwama-aggregates futhi avimbele amanye ama-pores odakeni. Ngakho-ke, udaka olulungisiwe ngemuva kokuqina lunokusebenza okungcono kunodaka lukasimende. Kube nentuthuko enkulu.
Isikhathi sokuthumela: Mar-18-2018